Induction brazing Carbide ka Iron-brazing tungsten carbide igwe anaghị agba nchara
Nnukwu ugboro induction brazing carbide ka ígwè.
Ngwa akwadoro maka ngwa a DW-HF-45KW igwe na-eme ka ihe nkedo ya na ọdụ ime ụlọ ọkụ.
Large magnetik ígwè malite ịgba isi na carbides. Isi ruru ihe ruru. 8 "OD x 4" (203.2mm OD x 101.6mm) gbara ọkpụrụkpụ, okporo bụ 11 "(279.4mm) ogologo x 2" (50.8mm) na 5 "(127mm) OD.
Carbides 1.125 ”(28.5mm) ogologo x 0.75” (19.05mm) OD nke dome yiri ya dị okirikiri n’isi, recessed ihe ruru. 0.8 ”(20.3mm) n'ime isi.
ike: Ruo 37kW
Okpomọkụ: 1500 ° F + (815 Celsius C +)
Oge: Alloy na-asọpụta na mpụga ọtụtụ carbides na 50 sekọnd. Ebe etiti na carbides dị n’ime na-amalite igosi alloy dripping na 1 nkeji na 40 sekọnd.
Nsonaazụ ule na-egosi na iwepu carbide ga-ekwe omume. Na mbido, ọ dị mkpa ka akụkụ ahụ dị ọkụ ma jide ya na okpomọkụ iji kwe ka ume nkwado alloy ka mmiri pụọ. Ọ dị mkpa ịkwado akụkụ ahụ na carbides na-eche ihu. A na-achọ ihe na-eme mpụga iji mechaa carbides ahụ iji mee ka ha jide ya. Kpachara anya: mgbe ị na-ewepụta carbides, ihe na-ekpo ọkụ nke na-ekpo ọkụ nke nwere ike ịpụta n'ime oghere maka carbides mgbe ewepụrụ ha.
Categories Technologies Tags brazing carbide, brazing carbide na-etinye ya na nchara, igwe eji eme ihe nkwado, Brazing carbide ka ígwè, brazing ígwè ka carbide, brazing tungsten carbide ígwè, brazing tungsten carbide ka igwe nchara, ogologo oge brazing carbide, nkwalite brazing carbide, Brazing na-ebugharị na ígwè, ọla ọcha brabide ka ígwè Mail igodo